कीर्तिमान नै कीर्तिमान बनाए पनि खुशी छैनन् मेस्सी ! - Sarbochcha Media
कीर्तिमान नै कीर्तिमान बनाए पनि खुशी छैनन् मेस्सी !
July 20, 20 12:53 pm
एजेन्सी, ५ असार । लियोनल मेसीले कप्तानीका रूपमा बार्सिलोनालाई स्पेनिस ला लिगा फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि दिलाउन सकेनन् । बार्सिलोना उपाधिविहीन भए पनि मेसीले व्यक्तिगत रूपमा यसपटक पनि सफलता चुमेका छन् । उनी सातौँपटक ला लिगाकै सर्वाधिक गोलकर्ता बने । आइतबार राति ला लिगाकै अन्तिम चरणका खेल भए । बार्सिलोनाले आल्भेसमाथि ५–० को सानदार जित निकाल्यो । यस खेलमा कप्तान मेसी दुई गोल गर्दै सातौँपटक ला लिगाकै सर्वाधिक गोलकर्ता बने ।
जापानी नाओमी ओसाकाले दोस्रो पटक युएस ओपन ग्राण्डसलाम टेनिसको उपाधि जितिन्